गल्ती सच्याएर मूल नेतृत्वमा फर्किए पार्टी एक भएर जाने सम्भावना छ ! | Hindu Khabar
गल्ती सच्याएर मूल नेतृत्वमा फर्किए पार्टी एक भएर जाने सम्भावना छ !
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि देशमा अन्योल छाएको छ । स्वयं प्रधानमन्त्री रहेको पार्टी नै विभाजनको संघारमा पुगेको छ । औपचारिक रूपमा नेकपा विभाजन नभए पनि विभाजनको असर स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । नेकपाका कार्यकर्ता बाँडिएका छन् । पार्टीभित्रै प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र निरंकुशतावादीको संज्ञा दिएका छन् । नेताहरू बीच आआफ्नो पक्षमा बहुमत छ भनी कार्यक्रम आयोजना गरी दुवै पक्षले एक अर्काविरुद्ध घोचपेच गरिरहेका छन् । संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा परेको छ । आजदेखि यसको निरन्तर सुनुवाइ गर्ने अदालतले जनाएको पनि छ । यसैगरी निर्वाचन आयोगमा दुवैपक्षका नेताले आफू नै पार्टीको आधिकारिक भनी नाम र चुनाव चिन्ह दाबी गरिरहेका छन् । वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालेको कदमका बारेमा नेकपाकै नेतासँग गरेको कुराकानीको सार :
जनताको जित हुन्छ !
प्रस्तुति: घनश्याम पौडेल
मूल कुरा नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने कल्पनासमेत गरेको छैन । हामी प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूलाई नेपाली जनताले पाँच वर्षका लागि निर्वाचित गरेर पठाएका हुन् । म अहिले पनि गर्वका साथ भन्छु, प्रतिनिधिसभा जीवित छ । हामी सांसदहरू जीवित छौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमले प्रतिनिधिसभा संसद्मा अवरुद्धता मात्रै पैदा भएको छ । हामीले आशा एवं विश्वास गरौँ, सर्वोच्च अदालतले हामी सबैलाई न्याय दिनेछ । संविधानलाई ब्युँताउन थप सशक्त आन्दोलनका साथ सडकमा जानुपर्ने छैन । प्रस्तुति :गमला लामा
#(कारोवार दैनिकमा प्रकाशित अन्र्तवार्ता हो ।)